Waxaan buuxda bixiya kala duwan oo laga qabanin, ee Direct Roving. tuug The bixiyeen noo by waa duxda yo shaqaalaha our taabday, oo hubin in ay tani tahay at par heerarka warshadaha dhigay dhigi. tuug ku bixiyey waxaa laga heli karaa caddaymaha kala duwan. Waxaa intaas dheer in this, macaamiisheena qiimeeyo abaalmarinayn this dambana wuxuu naga in caddaymaha kala duwan ee qiimaha sare leh oo la awoodi karo.
Our soo diyaariyeen ee alaabta oo tayo leh ka xoogbadan, waxaa ka mid ah ururinta gaar ah ee Fiber Roving. tuug The bixiyeen yihiin duxda by xirfadlayaasha xirfad our la isticmaalayo qalab tayo fiican in aan u yeelo oo ka iibiya ugu idman ee warshadaha. Sidoo kale, waxaa loo qoondeeyey ee par la caadooyinka tayo leh warshadaha iyo ka samaysan yihiin la heli karo in tirada kala duwan ee heerka ugu macquul ah.
badeecada ku haboon yihiin dhammaan noocyada kala duwan ee qolof FRP. The alaabta ka mid ah ay yihiin kuraasta, haanta biyaha, qaybo ka mid baabuurta, qalabka dhismaha, alaabtaadu nadaafada, taangiga kaydinta iyo wixii la mid ah. duudduuban kasta oo si toos ah tuug oo daboolaya by xuub yaraanshaha ama barbaro xuub, ka dibna lagu meeleeyaa kartoon ama fadhiisiyo sariirtaada. sariirtaada kasta leenahay karaa 48 ama 64 duub. miisaanka kasta oo duudduuban waa 15-18kg. Waxaa sii kordhaya kartaa miisaanka oo duudduuban oo waafaqsan shuruudaha macaamiisha. xidhmooyin sariirtaada ma sarrayn doonaa ka badan 2 layers, kartoon ma sarrayn doonaa ka badan 5 layers.